Eyona > Onenote
Iikholamu kwi-onenote-iimpendulo eziqhelekileyo
Ndiyisusa njani i-OneNote? Kwimenyu yokuQala, khetha i-icon yamavili egiya. Khetha iNkqubo> IiNkqubo kunye neempawu. Khetha Izixhobo Zokufunda ze-OneNote, emva koko ukhethe Khipha.
onenote indlela emfutshane yokunqumla
Indlela emfutshane ye-Onenote yokubonisa indlela esombulula ngayo
Ndiyidibanisa njani i-hyperlink? Ukususa i-hyperlink kodwa ugcine isicatshulwa, cofa ekunene kwi-hyperlink kwaye ucofe Susa i-Hyperlink. Ukususa ikhonkco elipheleleyo, ukhethe kwaye ucinezele u-Cima.
Isakhiwo sefayile ye-Onenote-isisombululo
Zaya phi iincwadana zam ze-OneNote? I-OneNote 2016 igcina onke amanqaku akho kwiincwadana zakho, ezihlala zigcinwa kwifolda yakho yamaXwebhu kwifolda yazo. Ngenye indlela, zigcinwa kwiMicrosoft OneDrive. Unokugcina iincwadana kwindawo ekwabelwana ngayo kwinethiwekhi yakho, okanye naphina apho ufuna khona.
susa umshicileli onenote
Susa iprinta ye-onenote-isisombululo esisebenzayo
Ndiyilungisa njani i-OneNote eyonakeleyo? 2. Kwi-OneNote, yiya kwiFayile -> Ulwazi -> Vula i-Backups, kwaye uvule indawo yogcino yamva nje. Ukuba ifayile ikhangeleka intle, ungayirhuqela kwincwadana yakho kwaye ucime ifayile eyonakeleyo. Kananjalo unokusebenzisa i-OneNote Fix Toolbox. Ngo-2014
U-Onenote akakwazanga ukuvumelanisa-indlela yokuphatha
Ndiqokelela njani imiyalezo kunye nemifanekiso kwi-OneNote? Kweliphi na iphepha, beka imifanekiso ngendlela ofuna ivele ngayo. Susa yonke imifanekiso ngokunqakraza kwenye indawo kwiphepha. Bamba iqhosha le logo yeWindows, kwaye ucinezele iShift + S ukuqala ukucofa isikrini. Xa isikrini siba mfiliba, tsala ukhetho kwimifanekiso ofuna ukuyenza kwiqela.
Ukwalelwa kwesandla se-Onenote-imibuzo eqhelekileyo
Ngaba i-OneNote ingagcina iifayile ekuhlaleni? Ukugcinwa kweefayile zamanqaku kusetyenziswa i-OneNote App ye Windows 10 yenzeka kwi-OneDrive, eyinkonzo ka-Microsoft yokugcina ilifu esekwe kuluntu. Ezi fayile zikwindawo egcinwe ngaphakathi, evumela ukufikelela kwi-intanethi kuzo. Iincwadana zamanqaku ezigcinwe kuphela kwihard drive yakho okanye isabelo sefayile (esibizwa ngokuba ziincwadana zamanqaku zasekhaya) azixhaswanga. Ngo-2018
Dibanisa iiseli-indlela yokujongana nayo
Ndizidibanisa njani iibhokisi kwi-OneNote? Dibanisa imixholo yezikhongozeli zenqaku Bamba u-SHIFT. Cofa isiphatho sokuhambisa isikhongozeli sokuqala, emva koko usirhuqe ngaphezulu kwayo nayiphi na isikhongozeli senqaku kwiphepha elinye. Xa iziqulatho zezikhongozeli zidityanisiwe, khupha isitshixo se-SHIFT.